Gantootaa fi Hayyalaallattootaan dhaabni ABO hin diigamu. | Kichuu
Miseensotni Addi Bilisummaa Oromoo kaayyoo, Seeraa fi Heera ABO jala hiriiru malee fedhii dhuunfaa fi dantaa dhufiin hin jiraatan. Warri kaleessa dhaaba ABO keessa taa’anii dirqama Mootummaan isaaniif kennu fudhatanii dhaaba ABO dadhabsiisaa qooqqodaa turan har’a gaafa guyyaan gahee dhaabni ABO erga gara Oromiyaatti dhufee ummatni ifatti namoota dhaaba ABO keesda taa’anii guyyaa guyyaa waajjira Gullallee halkan halkan tikoota Mootummaa waliin mana dhugaatii bulan ragaalee viidiyoo waliin kan argisiisu eenyu waliin akka tahan qabatee caasaa quunnamtii qabu irraa ciruun waliin dalaguu kan dhaabe tureera.
Miseensotni ABO badii Hayyalaallattootaa fi gantootni godhan tokkummaa dhaabichaaf jecha obsaan karaa keessaa fixanna jechuun kadhachaa turan .
Garuu akkuma afaan Dubbii Bare Bulluqa Alalfata jedhan namootni dhaaba ABO keessa taa’anii dantaa dhuunfaa malee qabsoo sabaa quban qabne gaafa miseensi dudduubee isaanii dhoksee waliin jiraatu isaan garuu diinaa fi gantoota tahuu ifatti of labsanii jiru.
Tibbana dhaaba ABO keessatti shira isaan dalaganiif miseensotni ABO hundi gubbaa hanga gadiitti namoota shira xaxan waliin guutummaatti dhaabuun dirqama Dhaabni ABO itti kenne guyyuu bahachaa jiru.
Miseensotni ABO ajandaa ololaa amma gantootni dhaaba ABO keessa taa’anii Mootummaa waliin hojjechaa miseensota ABO Hoggantoota ABO hanga miseensota gadiitti hiisisaa turaniif ragaa waliin kan jiru tahus galmee seenaaf ol kaayyannee ammas olola gantootaan afarsamu dhiisnee dhaaba keenya ABO waliin qabsootti haa fuulleffannu.
Erga Baatii Adoolessa as rakkoo dhaaba keessatti gantootni uuman tuffachuun bakka kennuu dhiisamee hojii hubbaa irraa hanga gadii karaa Hogganasa HD jaal Daawud Ibsaa fi miseensota GS ABO gaggeeffamaa jiru ammas itti akka fufu akeekaa ajandaa ololaa diinni qabsoo keenya laamshessuuf uumuuf bakka kennuu dhiisnee Irbuu jaallan kufaniif galma gahumsaaf haa hojjennu.
Oromiyaa keessatti, dhiittaan mirga namoomaa sadarkaa kana irra gahee jira; dhala Oromoo akka horiitti ciibsanii garafuu fi tumuun itti fufeera; sirni Itoophiyaa Oromoo akka hin gidirsine gochuuf marti keenya jabaachuu qabna.